Libanona: Feo voalohany voarahona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2010 7:00 GMT
Fantatra àry notsiriritina tany amin'iny faritr'i MENA iny noho ny fahalalàhan'ny tontolo virtoaly (cyberspace) nanànany i Libanona. Tsy dia izany loatra intsony kosa nony nanamarika ny volana Martsa ny olan'ny sivana aterineto voalohany tao Libanona.
Khodor Salameh (aka Jou3an), mpitoraka blaogy sady mpanao gazety Libaney
Tamin'ny faha-15 MArtsa, Khodor Salameh na “jou3an“ (Noana amin'ny teny Arabo), mpitoraka blaogy sady mpanao gazety Libaney dia nanoratra lahatsoratra iray[Ar] tao amin'ny blaoginy izay nanakianany mafy an'i Michel Suleiman, Filoha Libaney. Andro vitsy taty aoriana, nantsoin'ny mpitandro filaminana Libaney hatao fanadihadiana izy, ka tamin'izany no nandrahonan'izy ireo azy fa ho henjehina noho ny fanalam-baraka izy raha tsy manova ny fomba fiteniny, manakatona ny blaogy na manoratra tononkalo monja ihany.
Niray hina ireo mpitoraka blaogy Libaney rehetra, na eo aza ny tsy fitovian'ny fijery politikan'izy ireny, ary naneho ny fanohanan'izy ireo an'i Khodor – na miombon-kevitra na tsia amin'izay voalazany izy ireo. Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitr'izy ireo:
Hrammal dia nanohana[Ar] an'i Khodor amin'ny filazàna fa “Izahay rehetra dia Khodor daholo”:
Te-hilaza fotsiny izahay, fa izahay rehetra dia samy Khodor Salameh avokoa, fa izahay rehetra dia eo an-damosinao daholo hanohitra ny bibidia sy ny forongony. Ary maro izahay.. Ny vahoaka manontolo
Mowatin Shahhath (na ilay tàry mpangataka) dia nanomboka ny lahatsorany[Ar] tamin'ny fanasongadinana ny lalampanorenana Libaney izay miaro mazava tsara ny fahalalàhana miteny ho an'ny olompirenena Libaney. Nampiany fa:
Angamba raha ny nanjo ny mpitoraka blaogy sady mpanao gazety Khodor Salameh dia manamarina fa isika – eto Libanona – dia tsy mbola nahatratra ny dingana voalazan'ny andalana faha #13 tokony hajaina ao amin'ny Lalampanorenana Libaney, izay milaza ny fanajàna ny fahalalàhana miteny.
Ninar koa dia naneho ny fanohanany ao amin'ny lahatsorany[Ar], izay itodihany sy ilazany amin'ireo manampahefana hoe:
Aoka ho tonga saina fa ny tontolo virtoaly Libaney, indrindra indrindra fa ny tontolon'ny fitorahana blaogy, dia tsy azo tambatambazana na tsindriana aloka. Noho izany, aza mandrera-tena ianareo. Ary avelao (tsitsio) ireo mpitsikilonareo mpanara-maso blaogy ampolony isan'andro ireo. Dia avelao izahay hanoratra momba ity kilasy politika heniky ny kolikoly izay arovanareo ity. Manan-javatra tsara be horesahana momba izany izahay.
Hashemite dia niampanga ny governemanta Libaney ho toy ny rafitra lò. Hoy izy[Ar]:
Ity rafitra mifikitra amin'ny sekta sy “lò” ity izay tsy afaka mametraka lalàna momba ny heloka bevava satria ry zareo manaraka ny sektany, dia manenjika ireo izay manohitra ny kolikoly ataony, dia ireo izay tsy manana afa-tsy ny blaogy mba ho ampiasaina. Mampahatahotra sy mampiforitra azy ireo izany, fa satria nahoana?!!! Noho ny kiakiaka fanoherana ny fahantran'ny firenena iainanay eto amin'ity tanindrazana ity.
Liliane dia nanamarika ny fifanandrifian'ny andro nanadihadiana an'i Khodor tamin'ny hetsika fanentanana ny 18 Martsa, ( izay teraka taorian'ny nahafatesan'i “Omid Reza Mir Sayafi” ilay Iraniana mpitoraka blaogy maty tany am-ponja). Hoy izy nanampy:
Tsy ijerena loatra ny mety ho fitoviam-pijeriko amin'ilay mpitoraka blaogy namana Khodor, fa ny azoko lazaina dia izao, manantena aho , izay nireharehako tapa-bolana lasa izay, mbola hijanona ho reharehako hatrany ka tsy hilatsaka anatin'ny haraton'ny fahajambana, ny famoretana, ny tsy fahamarinana ary ny rafitra tsy manaraka lalan-tsaina.
Amin'ny lafiny iray, i Rany, Libaney mpitoraka blaogy, dia tsy miombon-kevitra loatra amin'izay nambaran'i Khodor saingy kosa manohitra ny fandrahonana. Hoy izy tao amin'ny lahatsorany farany “The lettuce theory ( ny teorian'ny laisoa)“:
Na dia tsy miombon-kevitra amin'ilay mpitoraka blaogy amin'izao aza aho, ity fomba nifampiresahana taminy ity, na tamina mpitoraka blaogy hafa koa dia tena toherina tanteraka sy tsy misy ilàna azy tanteraka, ary ho an'izay rehetra nanapa-kevitra hanadihady momba ny mpitoraka blaogy mikasika izay navoitrany dia izao no tiako hambara, mba mihalehibe amin'izay, tàry kely manoratra ao amin'ny blaoginy fotsiny izy ka inona no hanaovanareo tantara be amin'izany? Maro no miombon-kevitra aminy ary maro koa no mitsipaka, izany no zavatra iainana eto Libanona ka izany tsy ho azonareo hovàna amin'ny fanerena azy hanova fiteny.
“Hanibaael“, mpitoraka blaogy sady mpanao gazety, dia namoaka filazàna ofisialy iray[Ar] amin'ny anaran'ny vondron'ireo Libaney mpitoraka blaogy manohana an'i Khodor:
Miainga avy amin'ny zava-niseho, ny Vondron'ireo Libaney mpitoraka blaogy dia mitsipaka ny fanafoanana ny fahalalàhan'ny daholobe, indrindra indrindra fa ny famoahana amin'ny aterineto, ary dia mampahatsiahy ny antso avon'ny filoham-pirenena: “ Ndeha hitambatra ka hiasa hanangana firenen'olontsotra mifototra amin'ny fanajàna ny fahalalàhan'ny daholobe, hànana finoana sy hiteny”. Ny Antenimiera ihany koa dia niantso ny hampitsaharana ny fanitsakitsahana ny zo maha-olona sy ny fahalalàhan'ny daholobe. Koa manainga ireo mpitoraka blaogy sy mafàna fo izahay mba hanohana sy hamoaka ity filazana ity any anatin'ny blaogin'izy ireo sy any anatin'ny tranonkalan'ny fikambanan'izy ireny. Manao antso avo koa izahay ho an'ireo media mba hanandra-peo tsy hidinan'ny Libanona ao anatin'ny tadion'ny fampanginana ny feon'ny fahalalàhana.
Layal dia diso fanantenana noho i Libanona tafiditra amin'ny lisitr'ireo firenena ary niteny hoe:
Libanona, Tonga soa ao amin'ny Ireo Feo voarahona! [Threatened Voices!]
Ankoatra izay, Zeinobia, Ejiptiana mpitoraka blaogy, dia tena tohina mafy tokoa raha nandre ny vaovao. Hoy izy:
Izany ve no Libanona vaovao !!?? Izao ve no “Fahalalahana, ny fiandrianam-pirenena ary ny fahaleovantenan'” i Libanona vaovao!!?? Fahatafintohinana, tena fahatafintohinana!!??
Fiandohan'ny sivana atao amin'ny aterineto ao Libanona ve sa tranga maningana monja ihany izy ity? Araho ny fampitam-baovao avy any Libanona ao amin'ny Ireo Feo voarahona [Threatened Voices] mba tsy ho tara.